လှူဒါန်းမှု | Myanmar Red Cross Society (MRCS)
သင်၏ လှူဒါန်းမှု (မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်) ကြောင့် လူထုကို ဘယ်လိုအကူအညီပေးနိုင်မှာလဲ –
တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
မွေးကင်းစကလေးငယ်သုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
အမျိုးသားသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
မိသားစုသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်များ ၁ စုံ
မူလတန်းကျောင်းသားသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
မူလတန်းကျောင်းသူသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
အလယ်တန်း/အထက်တန်းကျောင်းသားသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
အလယ်တန်း/အထက်တန်းကျောင်းသူသုံးပစ္စည်း ၁ စုံ
ရှေးဦးပြုစုခြင်းဆေးသေတ္တာ ၁ စုံ
ရှေးဦးပြုစုခြင်းဆေးအိတ်ငယ် ၁ စုံ
ရှေးဦးပြုစုခြင်းဆေးအိတ်ကြီး ၁ စုံ
အသင်းသို့ အလှူငွေထည့်ဝင်လှူဒါန်းလိုပါက အောက်ပါ ရွေးချယ်မှုများမှ သင့်လျော်ရာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက် လှူဒါန်းလိုပါက မိမိလှူဒါန်းလိုသည့် စီမံကိန်းကို သေချာဖော်ပြရန် (ဥပမာ- ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေး၊ မီးဘေးကယ်ဆယ်ရေး စသည်….) လိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသို့ ငွေသားတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းလိုပါက ဖော်ပြပါ ဘဏ်စာရင်းသို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
KBZ Bank – စာရင်းအမှတ် : ၀၆၀ ၁၀၃၀ ၆၀၀၅ ၈၃၄၇ ၀၁ ၃၃-၄၉၊ မဟာဗန္တုလလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်း၊ ခြောက်ထပ်ရုံးအဆောက်အဦး၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
2. နိုင်ငံခြားငွေကြေး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
KBZ Bank International Banking Division (Foreign Remittance) – စာရင်းအမှတ် : ၀၆၀ ၁၀၉၀ ၆၀၀၃ ၃၉၁၄ ၀၁ ၅၃ ကမ်းနားလမ်း၊ ခြောက်ထပ်ရုံးအဆောက်အဦး၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အသင်းသို့ ပုံမှန်လှူဒါန်းခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတွင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်လှူဒါန်းလိုသည့် ကာလနှင့် လှူဒါန်းမှုအတွက် ဆက်သွယ်လိုပါက –
ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး _ nyonyowint@redcross.org.mm